ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ခင်ဗျားတို့ကို သတိရနေမှာပါ . . . . . . - SPORTS MYANMAR
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ခင်ဗျားတို့ကို သတိရနေမှာပါ . . . . . .
သို့ . . . . . မစ္စတာ ၀ီစလေ ဆနိုက်ဒါ ။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အနားယူမှု လေး ဖြစ်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေး လိုက် ပါတယ် ။ အိုင်ယက်စ် ကနေ စတင်ခဲ့ တဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ဘောလုံး ခရီးစဉ် ဟာ ၁၇ နှစ် အကြာ မှာတော့ ဆုံးခန်း တိုင်သွား ခဲ့ပြီလေ ။ ခင်ဗျား ရဲ့ ကန်ချက် ပြင်းပြင်းတွေ ၊ တိကျ တဲ့ ပေးပို့မှုတွေ ကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ ခွင့် ရတော့ မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် မစ္စတာ ဆနိုက်ဒါ . . . ခင်ဗျား ကို ကျွန်တော်တို့ အမြဲ သတိရ နေမှာပါ ။
ခင်ဗျား သိတော့ သိနေ တယ်မဟုတ်လား မစ္စတာ ဆနိုက်ဒါ ။ ဒီနှစ် ဟာ ဘောလုံး ကြယ်ပွင့်တွေ မြက်ခင်း စိမ်း ကို ကျောခိုင်းတဲ့ နှစ် ဆိုတာ ကိုလေ ။ အခုမှ သြဂုတ် လပဲ ရှိသေး ပေမယ့် ခင်ဗျား အပါ အ၀င် ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့ ဘောလုံး သူရဲကောင်းတွေ အနားယူ သွားခဲ့တာ ၇ ယောက် အထိ တောင် ရှိလာခဲ့ ပီဗျာ ။ တစ်ချိန်တုန်း က ကျွန်တော်တုိ့ စွဲစွဲ မက်မက် အော်ဟစ် အားပေး ခဲ့ကြတဲ့ ဘောလုံး စူပါ ဟီးရိုးတွေ ပေါ့ ။
ဒီအထဲ က ၂ ယောက် ကိုတော့ ခင်ဗျား ရင်းရင်းနှီးနှီးကြီးကို သိနေ မှာပါ ။ အာဂျန် ရော်ဘင် နဲ့ ရော်ဘင် ဗန်ပါစီ တို့ ကိုလေ . . . . ခင်ဗျား တုိ့ ၃ ယောက် ရဲ့ အစွမ်း တွေ နဲ့ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ ဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ နယ်သာလန် ကို ဖိုင်နယ် ပို့ပေးခဲ့ တာကို ကျွန်တော်တို့ အခုထိ သတိရ နေကြတုန်းပဲဗျ ။ နောက် ၄ နှစ် အကြာမှာလည်း အုပ်စု ပွဲမှာ စပိန် ကို ၅ ဂိုးပြတ် အနိုင်ယူပြီး အောင်ပွဲ ခံခဲ့ကြတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ၃ ယောက် ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ ဟာ ကမ္ဘာ့ ဖလား ရဲ့ သမိုင်းမှာ အမြဲ ထပ်ဟပ် နေဦးမှာပါ ။
အခု ဘောလုံး မကန်တော့ဘူး ဆိုတော့ ခင်ဗျား ဘာလုပ် မလဲဗျ ။ ဘော်ဒါကြီး ဗန်ပါစီ ကတော့ ဘောလုံး အစီအစဉ် တင်ဆက် သုံးသပ်သူ ဖြစ်နေ ပြီလေ ။ သူတစ်ချိန် က ကျဉ်လည် အောင်မြင် ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကို တစ်ခေါက် ပြန်သွားလေရဲ့ ဗျာ ။ အင်္ဂလန် မြေက အကြောင်းတွေ ကို ရော်ဘင် ၊ ဗန်ပါစီ တို့နဲ့ ဆုံတဲ့ အခါတွေ မှာ ခင်ဗျား မေးဖြစ်မလားတော့ မသိဘူး ။ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ခင်ဗျား ကစားတာကို မတွေ့နိုင်တော့ တာ တကယ် စိတ်မကောင်း စရာပါပဲ ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အင်္ဂလန် မြေမှာ နယ်သာလန်သားတွေ တောက်ပခဲ့ကြဖူးတယ် လေ . . .
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား တုန်းက ဗိုလ်လုပွဲ မှာ ခင်ဗျား တို့ အသည်းကို ခွဲသွားခဲ့တဲ့ စပိန် အသင်း က ကွင်းလယ်လူ ဇာဗီ ဟာနန်ဒက် ကို ခင်ဗျား မှတ်မိ ဦးမလား မစ္စတာ ဆနိုက်ဒါ ။ သူလည်းပဲ ခင်ဗျား ရှေ့လေးတင် အနားယူ သွားခဲ့တာဗျ ။ သူကတော့ အနားယူတဲ့ ကလပ် မှာပဲ နည်းပြ အဖြစ်နဲ့ ပြန် လုပ်ကိုင် နေလေရဲ့ ။ တစ်နေ့မှာ သူချစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာ ကို ပြန်မယ် ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ နဲ့ ပေါ့ဗျာ ။ ခင်ဗျား ရော သူ့လို နည်းပြ လုပ်ဖို့ စိတ်ကူး ထားသေးလား ၊ စိတ်ကူး ထားတယ် ဆိုရင်တော့ အိုင်ယက်စ် နဲ့ အင်တာ မီလန် များဖြစ် နေမလားဗျာ
ခင်ဗျား အစွမ်းတွေ ပြခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ကို ကျွန်တော်တို့ မေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အင်တာ နဲ့ ရခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ မှာ ခင်ဗျားရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ က အထင်အရှား ကို ရှိနေခဲ့ တာပါ ။ ကမ္ဘာ့ ဖလား မှာလည်း ဒီအတိုင်း ပါပဲ ။ မက်ဆီ – ရိုနယ်ဒို အားပြိုင်မှု အကြားမှာ ရွှေဘောလုံး ကို ဖောက်ထွက် ရယူနိုင်မယ်လို့ တောင် ထင်ခဲ့ကြပါ သေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် မစ္စတာ ဆနိုက်ဒါရေ . . . လောကကြီးက တစ်ခါတစ်လေ တော့ နားလည်ရခက်ပါတယ်ဗျာ ။
အီတလီ က ခံစစ်သမားကြီး ဘာဇဂါလီ ကိုတော့ ခင်ဗျား ရင်းနှီးချင်မှ ရင်းနှီးမှာပါ ။ သူက ခင်ဗျား စီးရီးအေ မှာ ကစားခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းက ပြိုင်ဘက် ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ မှာ သေချာ ပါတယ် ။ အီတလီ နဲ့ ယူဗင်တပ် တို့ရဲ့ ဂန္ထ၀င် ကျောက်ဆောင်ကြီးလည်း နောက်ဆုံးတော့ နားသွားခဲ့ ပြီဗျ ။ အခု အီတလီ ခံစစ်ကြောင်း က မျိုးဆက်သစ်တွေ နဲ့ ဖွဲ့စည်း နေပြီလေ ။ မာဒီနီ – နက်စတာ ၊ ကန်နာဗာရို – မာတာရာဇီ ၊ ချီယာလီနီ – ဇာဘဂါလီ – ဘိုနူချီ တို့လို ခံစစ် အတွဲကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ဖူးတဲ့ အီတလီ မှာ ဘယ်လို ခံစစ်မျိုးဆက်သစ် တွေ ပေါ်ထွက် လာမလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျား သိချင်စိတ် မရှိဘူးလား မစ္စတာ ရေ . . .
ပီတာဆက်ခ်ျ ကတော့ အာဂျန်ရော်ဘင် ပြောပြဖူးတဲ့ ချဲလ်ဆီး က အကြောင်းတွေ ထဲမှာ ပါမယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်ဗျ ။ သူက ချဲလ်ဆီး ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဂန္ထ၀င် တစ်ယောက် ၊ သူရဲကောင်း တစ်ယောက် ပါ ။ အာဆင်နယ် ကို ရောင်းထုတ် ခဲ့တာ တောင်မှ စိတ်မနာခဲ့ဘဲ အနားယူသွားချိန် မှာ ချဲလ်ဆီး ကို ပြန်ခဲ့တဲ့ ဆက်ခ်ျ ရဲ့ နှလုံးသား ဟာ အပြာရောင် ဖြစ်နေမယ် ဆိုတာ လန်ဒန် ကို ရောက်တဲ့ အခါ ခင်ဗျား ကို ပြောပြ ကြပါလိမ့်မယ် မစ္စတာ ဆနိုက်ဒါရေ . . . .
တင်ကာဟေး နဲ့ ခင်ဗျား ဘယ်နှခါ ဆုံခဲ့ဖူး သလဲ . . . ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ ဖလား လို့ ထင်တာပဲဗျ ။ အုပ်စု ဒုတိယပွဲ မှာ ခင်ဗျားနဲ့ သူ ဆုံခဲ့ကြတယ်လေ ။ ရောဘင်ရဲ့ ဂိုး နဲ့ ခင်ဗျား တို့ ဦးောဆာာင် နေခဲ့ ပေမယ့် တစ်မိနစ် အကြာမှာပဲ အ၀ါရောင် သူရဲကောင်းကြီး က မြေမကျ အပြင်းကန်ချက် နဲ့ ပြန်ချေပ ခဲ့တာလေ ။ သူ အောင်ပွဲခံ တာကို ရောတွေ့လိုက်သေးလားဗျ ။ ကွင်းထောင့်ကို ပြေးပြီး အလံတိုင် ကို လက်သီးတွေ ပစ်သွင်း တဲ့ စတိုင်လေ ။ ဒါ က တင်ကာဟေး ရဲ့ Signature ပဲဗျ ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မယ် မထင် ပါဘူး ။
တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ပါပဲ မစ္စတာ ဆနိုက်ဒါရေ ။ အဲ့ဒီ့ ၂၀၁၄ ပွဲတုန်းက ဂိုးသွင်းခဲ့ ကြတဲ့ ရော်ဘင် ၊ ဗန်ပါစီ နဲ့ တင်ကာဟေး တို့ ၃ ယောက်စလုံး ဒီနှစ်ထဲ မှာ နားခဲ့ကြတယ်နော် ။ ခင်ဗျား နဲ့ သိပ်မကွာ လိုက်ပါဘူး ။ နောက်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ကွင်းထဲမှာ ပြေးလွှား ကစားနေတာတွေ ကို မြင်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
နောက် ၁၀ နှစ် ၊ ၁၅ နှစ် လောက် ကြာတဲ့ အခါမှာတော့ မျိုးဆက်သစ် လေးတွေ ဟာ YouTube က နေပြီး ခင်ဗျားတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲတွေကို ပြန်ကြည့်ပြီး “WoW” လို့ ရေရွတ်နေကြမှာ အမှန် ပါပဲ ။ ဒီလိုပါပဲ မစ္စတာ ဆနိုက်ဒါ ၊ လူဆိုတာ အို ကြမယ် ၊ နာကြမယ် ၊ သေကြမယ်လေ ။ အခု ခင်ဗျား တို့လည်း အိုလာ ကြလို့ နားခဲ့ကြရပြီ ၊ မကြာခင်မှာပဲ နောက်ထပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘောလုံး သူရဲကောင်းတွေ နားကြရဦးမှာပါ ။
တစ်နေ့ ကြရင်တော့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ရော ၊ လီယွန်နယ် မက်ဆီ ရော မရှိတော့တဲ့ ဘောလုံး ကမ္ဘာကြီး ကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ ရတော့မယ် မစ္စတာ ဆနိုက်ဒါရေ . . . အဲ့ဒီ အချိန် ကျရင် ခင်ဗျား ဘာလုပ် နေမှာလဲ . . .
ပြင်းထန်တဲ့ ကန်ချက်တွေ ၊ ဆူညံတဲ့ အားပေးသံတွေ ၊ တရွှီရွှီ မြည်နေတဲ့ ခရာသံတွေ ၊ အသင်းဖော်တွေ နဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ အော်ဟစ်သံတွေ ၊ မောဟိုက် နေတဲ့ နှလုံးသား ရဲ့ တဒိတ်ဒိတ် ခုန်သံတွေ ၊ တစ်ခဏလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကို လန်းဆန်း သွားစေ လောက်တဲ့ လေနုအေးလေး တွေ ၊ မိုးစက်လေးတွေ ၊ မြက်ခင်းစိမ်းတွေ ၊ ဘောလုံးတွေ ၊ ဆုဖလားတွေ အားလုံးရဲ့ အဝေးကို ခင်ဗျား ထွက်သွားခဲ့ ပါပြီ ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ကတော့ ခင်ဗျား ကို ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ . . . .
ကြှနျတျောတို့ အားလုံး ခငျဗြားတို့ကို သတိရနမှောပါ . . . . . .
သို့ . . . . . မစ်စတာ ၀ီစလေ ဆနိုကျဒါ ။ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ အနားယူမှု လေး ဖွဈပါစေ လို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျ ပါတယျ ။ အိုငျယကျဈ ကနေ စတငျခဲ့ တဲ့ ခငျဗြားရဲ့ ဘောလုံး ခရီးစဉျ ဟာ ၁၇ နှဈ အကွာ မှာတော့ ဆုံးခနျး တိုငျသှား ခဲ့ပွီလေ ။ ခငျဗြား ရဲ့ ကနျခကျြ ပွငျးပွငျးတှေ ၊ တိကြ တဲ့ ပေးပို့မှုတှေ ကို ကြှနျတျောတို့ မွငျတှေ့ ခှငျ့ ရတော့ မှာ မဟုတျပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ မစ်စတာ ဆနိုကျဒါ . . . ခငျဗြား ကို ကြှနျတျောတို့ အမွဲ သတိရ နမှောပါ ။
ခငျဗြား သိတော့ သိနေ တယျမဟုတျလား မစ်စတာ ဆနိုကျဒါ ။ ဒီနှဈ ဟာ ဘောလုံး ကွယျပှငျ့တှေ မွကျခငျး စိမျး ကို ကြောခိုငျးတဲ့ နှဈ ဆိုတာ ကိုလေ ။ အခုမှ သွဂုတျ လပဲ ရှိသေး ပမေယျ့ ခငျဗြား အပါ အဝငျ ကြှနျတျောတို့ ခဈြတဲ့ ဘောလုံး သူရဲကောငျးတှေ အနားယူ သှားခဲ့တာ ရ ယောကျ အထိ တောငျ ရှိလာခဲ့ ပီဗြာ ။ တဈခြိနျတုနျး က ကြှနျတျောတို့ စှဲစှဲ မကျမကျ အျောဟဈ အားပေး ခဲ့ကွတဲ့ ဘောလုံး စူပါ ဟီးရိုးတှေ ပေါ့ ။
ဒီအထဲ က ၂ ယောကျ ကိုတော့ ခငျဗြား ရငျးရငျးနှီးနှီးကွီးကို သိနေ မှာပါ ။ အာဂနျြ ရျောဘငျ နဲ့ ရျောဘငျ ဗနျပါစီ တို့ ကိုလေ . . . . ခငျဗြား တို့ ၃ ယောကျ ရဲ့ အစှမျး တှေ နဲ့ ၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ ဖလား ပွိုငျပှဲမှာ နယျသာလနျ ကို ဖိုငျနယျ ပို့ပေးခဲ့ တာကို ကြှနျတျောတို့ အခုထိ သတိရ နကွေတုနျးပဲဗြ ။ နောကျ ၄ နှဈ အကွာမှာလညျး အုပျစု ပှဲမှာ စပိနျ ကို ၅ ဂိုးပွတျ အနိုငျယူပွီး အောငျပှဲ ခံခဲ့ကွတဲ့ ခငျဗြားတို့ ၃ ယောကျ ရဲ့ ပုံရိပျတှေ ဟာ ကမ်ဘာ့ ဖလား ရဲ့ သမိုငျးမှာ အမွဲ ထပျဟပျ နဦေးမှာပါ ။
အခု ဘောလုံး မကနျတော့ဘူး ဆိုတော့ ခငျဗြား ဘာလုပျ မလဲဗြ ။ ဘျောဒါကွီး ဗနျပါစီ ကတော့ ဘောလုံး အစီအစဉျ တငျဆကျ သုံးသပျသူ ဖွဈနေ ပွီလေ ။ သူတဈခြိနျ က ကဉျြလညျ အောငျမွငျ ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ကို တဈခေါကျ ပွနျသှားလရေဲ့ ဗြာ ။ အင်ျဂလနျ မွကေ အကွောငျးတှေ ကို ရျောဘငျ ၊ ဗနျပါစီ တို့နဲ့ ဆုံတဲ့ အခါတှေ မှာ ခငျဗြား မေးဖွဈမလားတော့ မသိဘူး ။ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ခငျဗြား ကစားတာကို မတှနေို့ငျတော့ တာ တကယျ စိတျမကောငျး စရာပါပဲ ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ အင်ျဂလနျ မွမှော နယျသာလနျသားတှေ တောကျပခဲ့ကွဖူးတယျ လေ . . .
၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလား တုနျးက ဗိုလျလုပှဲ မှာ ခငျဗြား တို့ အသညျးကို ခှဲသှားခဲ့တဲ့ စပိနျ အသငျး က ကှငျးလယျလူ ဇာဗီ ဟာနနျဒကျ ကို ခငျဗြား မှတျမိ ဦးမလား မစ်စတာ ဆနိုကျဒါ ။ သူလညျးပဲ ခငျဗြား ရှလေ့ေးတငျ အနားယူ သှားခဲ့တာဗြ ။ သူကတော့ အနားယူတဲ့ ကလပျ မှာပဲ နညျးပွ အဖွဈနဲ့ ပွနျ လုပျကိုငျ နလေရေဲ့ ။ တဈနမှေ့ာ သူခဈြတဲ့ ဘာစီလိုနာ ကို ပွနျမယျ ဆိုတဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှေ နဲ့ ပေါ့ဗြာ ။ ခငျဗြား ရော သူ့လို နညျးပွ လုပျဖို့ စိတျကူး ထားသေးလား ၊ စိတျကူး ထားတယျ ဆိုရငျတော့ အိုငျယကျဈ နဲ့ အငျတာ မီလနျ မြားဖွဈ နမေလားဗြာ
ခငျဗြား အစှမျးတှေ ပွခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ကို ကြှနျတျောတို့ မမှေ့ာ မဟုတျပါဘူး ။ အငျတာ နဲ့ ရခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ မှာ ခငျဗြားရဲ့ အခနျးကဏ်ဍ က အထငျအရှား ကို ရှိနခေဲ့ တာပါ ။ ကမ်ဘာ့ ဖလား မှာလညျး ဒီအတိုငျး ပါပဲ ။ မကျဆီ – ရိုနယျဒို အားပွိုငျမှု အကွားမှာ ရှဘေောလုံး ကို ဖောကျထှကျ ရယူနိုငျမယျလို့ တောငျ ထငျခဲ့ကွပါ သေးတယျ ။ ဒါပမေယျ့ မစ်စတာ ဆနိုကျဒါရေ . . . လောကကွီးက တဈခါတဈလေ တော့ နားလညျရခကျပါတယျဗြာ ။
အီတလီ က ခံစဈသမားကွီး ဘာဇဂါလီ ကိုတော့ ခငျဗြား ရငျးနှီးခငျြမှ ရငျးနှီးမှာပါ ။ သူက ခငျဗြား စီးရီးအေ မှာ ကစားခဲ့တဲ့ အခြိနျတုနျးက ပွိုငျဘကျ ကောငျး တဈယောကျ ဖွဈခဲ့ မှာ သခြော ပါတယျ ။ အီတလီ နဲ့ ယူဗငျတပျ တို့ရဲ့ ဂန်ထဝငျ ကြောကျဆောငျကွီးလညျး နောကျဆုံးတော့ နားသှားခဲ့ ပွီဗြ ။ အခု အီတလီ ခံစဈကွောငျး က မြိုးဆကျသဈတှေ နဲ့ ဖှဲ့စညျး နပွေီလေ ။ မာဒီနီ – နကျစတာ ၊ ကနျနာဗာရို – မာတာရာဇီ ၊ ခြီယာလီနီ – ဇာဘဂါလီ – ဘိုနူခြီ တို့လို ခံစဈ အတှဲကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျ ခဲ့ဖူးတဲ့ အီတလီ မှာ ဘယျလို ခံစဈမြိုးဆကျသဈ တှေ ပျေါထှကျ လာမလဲ ဆိုတာ ခငျဗြား သိခငျြစိတျ မရှိဘူးလား မစ်စတာ ရေ . . .
ပီတာဆကျချြ ကတော့ အာဂနျြရျောဘငျ ပွောပွဖူးတဲ့ ခြဲလျဆီး က အကွောငျးတှေ ထဲမှာ ပါမယျလို့ ကြှနျတျော ယုံကွညျတယျဗြ ။ သူက ခြဲလျဆီး ရဲ့ စဈမှနျတဲ့ ဂန်ထဝငျ တဈယောကျ ၊ သူရဲကောငျး တဈယောကျ ပါ ။ အာဆငျနယျ ကို ရောငျးထုတျ ခဲ့တာ တောငျမှ စိတျမနာခဲ့ဘဲ အနားယူသှားခြိနျ မှာ ခြဲလျဆီး ကို ပွနျခဲ့တဲ့ ဆကျချြ ရဲ့ နှလုံးသား ဟာ အပွာရောငျ ဖွဈနမေယျ ဆိုတာ လနျဒနျ ကို ရောကျတဲ့ အခါ ခငျဗြား ကို ပွောပွ ကွပါလိမျ့မယျ မစ်စတာ ဆနိုကျဒါရေ . . . .
တငျကာဟေး နဲ့ ခငျဗြား ဘယျနှခါ ဆုံခဲ့ဖူး သလဲ . . . ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ ဖလား လို့ ထငျတာပဲဗြ ။ အုပျစု ဒုတိယပှဲ မှာ ခငျဗြားနဲ့ သူ ဆုံခဲ့ကွတယျလေ ။ ရောဘငျရဲ့ ဂိုး နဲ့ ခငျဗြား တို့ ဦးောဆာာငျ နခေဲ့ ပမေယျ့ တဈမိနဈ အကွာမှာပဲ အဝါရောငျ သူရဲကောငျးကွီး က မွမေကြ အပွငျးကနျခကျြ နဲ့ ပွနျခပြေ ခဲ့တာလေ ။ သူ အောငျပှဲခံ တာကို ရောတှလေို့ကျသေးလားဗြ ။ ကှငျးထောငျ့ကို ပွေးပွီး အလံတိုငျ ကို လကျသီးတှေ ပဈသှငျး တဲ့ စတိုငျလေ ။ ဒါ က တငျကာဟေး ရဲ့ Signature ပဲဗြ ။ ဒါကို ကြှနျတျောတို့ ဘယျတော့မှ မနေို့ငျမယျ မထငျ ပါဘူး ။
တိုကျတိုကျ ဆိုငျဆိုငျ ပါပဲ မစ်စတာ ဆနိုကျဒါရေ ။ အဲ့ဒီ့ ၂၀၁၄ ပှဲတုနျးက ဂိုးသှငျးခဲ့ ကွတဲ့ ရျောဘငျ ၊ ဗနျပါစီ နဲ့ တငျကာဟေး တို့ ၃ ယောကျစလုံး ဒီနှဈထဲ မှာ နားခဲ့ကွတယျနျော ။ ခငျဗြား နဲ့ သိပျမကှာ လိုကျပါဘူး ။ နောကျဆိုရငျ ခငျဗြားတို့ ကှငျးထဲမှာ ပွေးလှား ကစားနတောတှေ ကို မွငျရတော့မှာ မဟုတျပါဘူး ။
နောကျ ၁၀ နှဈ ၊ ၁၅ နှဈ လောကျ ကွာတဲ့ အခါမှာတော့ မြိုးဆကျသဈ လေးတှေ ဟာ YouTube က နပွေီး ခငျဗြားတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲတှကေို ပွနျကွညျ့ပွီး “WoW” လို့ ရရှေတျနကွေမှာ အမှနျ ပါပဲ ။ ဒီလိုပါပဲ မစ်စတာ ဆနိုကျဒါ ၊ လူဆိုတာ အို ကွမယျ ၊ နာကွမယျ ၊ သကွေမယျလေ ။ အခု ခငျဗြား တို့လညျး အိုလာ ကွလို့ နားခဲ့ကွရပွီ ၊ မကွာခငျမှာပဲ နောကျထပျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဘောလုံး သူရဲကောငျးတှေ နားကွရဦးမှာပါ ။
တဈနေ့ ကွရငျတော့ ခရစ်စတီယာနို ရိုနယျဒို ရော ၊ လီယှနျနယျ မကျဆီ ရော မရှိတော့တဲ့ ဘောလုံး ကမ်ဘာကွီး ကို ကြှနျတျောတို့ မွငျတှေ့ ရတော့မယျ မစ်စတာ ဆနိုကျဒါရေ . . . အဲ့ဒီ အခြိနျ ကရြငျ ခငျဗြား ဘာလုပျ နမှောလဲ . . .
ပွငျးထနျတဲ့ ကနျခကျြတှေ ၊ ဆူညံတဲ့ အားပေးသံတှေ ၊ တရှီရှီ မွညျနတေဲ့ ခရာသံတှေ ၊ အသငျးဖျောတှေ နဲ့ ပွိုငျဘကျတှရေဲ့ အျောဟဈသံတှေ ၊ မောဟိုကျ နတေဲ့ နှလုံးသား ရဲ့ တဒိတျဒိတျ ခုနျသံတှေ ၊ တဈခဏလေးပဲ ဖွဈဖွဈ စိတျကို လနျးဆနျး သှားစေ လောကျတဲ့ လနေုအေးလေး တှေ ၊ မိုးစကျလေးတှေ ၊ မွကျခငျးစိမျးတှေ ၊ ဘောလုံးတှေ ၊ ဆုဖလားတှေ အားလုံးရဲ့ အဝေးကို ခငျဗြား ထှကျသှားခဲ့ ပါပွီ ။
ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ကတော့ ခငျဗြား ကို ဘယျတော့မှ မနေို့ငျမှာ မဟုတျပါဘူးဗြာ . . . .